အားလုံးအတွက်အာသာပြေ...: သန္တာလင်း ( ခေါ် ) အပျိုစင်ရဲ့ပေးဆပ်ခြင်း
sexlikecome ဘလော့ သည်အခြားဘလော့ များမှကုန်ချောကုန်ကြမ်းများနှင့် ကျနော်ရှာဖွေထားသမျှကုန်ကြမ်းများကိုကုန်ချောအဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတင်ဆက်ထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်ဟောင်းသည်သစ်သည်ကိုမညဉ်းညူပဲအာသာပြေနိုင်ကြပါစေ
် Saturday, 20 August 2011
အိပ်နေရင်းက ဆတ်ကနဲ နိုးလာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က အေးစိမ့်နေသည် ... ညကတည်းကရွာတဲ့မိုးက အခုထိရွာနေဆဲ ... တိုက်ခန်းလေးဆိုတော့ အအေးဓာတ်လေးက စိမ့်နေသည် ... မျက်စိတစ်ဖက်ကို ဖွင့်ရင်း ကုတင်ခြေရင်းက နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၈း၀၀ ဖြစ်နေပြီ ... အလုပ်က ၉း၀၀ နာရီတက်ရမှာ ... နောက်ကျလို့ကတော့ မန်နေဂျာရဲ့ အဆူခံရတော့မယ် ... အိပ်ရာက ၀ုန်းကနဲ ထရင်း ရေချိုးခန်းထဲ အမြန်ဝင်ကာ မျက်နှာ အမြန်သစ် သွားအမြန်တိုက်လိုက်သည် ... ည၀တ် အကျီ င်္ရဲ့ ကျယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်း ချွတ်လိုက်သည် ... ၀င်းဝါနေသော ရင်သားတွေက အိကနဲ ထွက်လာသည် ... မှန်ထဲမှာ ပေါ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရင်သားတွေကို ကိုယ်ကြည့်ရင်း အနည်းငယ်တော့ ကျေနပ်သွားသည် ... လုံးသည် .. ကျစ်သည် ... ဖြူသည် ... မို့သည် ... မောက်သည် ... နို့သီးလေးက ပန်းရောင်လေး ... အသီးလေးက အတွင်းထဲ နည်းနည်းဝင်နေသည် ... လှတာတော့ အရမ်းလှသည် ... နေမမြင် လမမြင် ...
ဖုံးဖုံးဖိဖိထားလို့လားမသိ ... အနာတစ်စက်မရှိ ... မှဲ့ ခြောက်တစ်စက်မရှိ ။
တကယ်ဆိုးတဲ့ လူဆိုး … Posted by
we don't allow under 18 to be watch and read အသက်၁၈နှစ်မပြည့် မကြည့် ရမဖတ်ရ(ဓတ်ပုံများနှင့် ကိုယ်တိုင်ရိုက်မူဗီများကိုဦးစားပေးတင်ထားပါတယ်)အားလုံးအာသာပြေနိုင်ကြပါစေ)
မေးလ်လိပ်စာထားခဲ့ ပါအသစ်တင်တိုင်းပို့ ပေးပါ့ မယ်
click here ကိုနှိပ်ပါ
download from server1 ကိုclickပါ
ကြည့် ချင်ရာကိုကြည့် ဒါလေးနဲ့ 
ကျော်နေခွနေရပါတယ်ကြည့် လို့ မရလို့ ဆိုပြီးအော်နေတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ..downloadလုပ်ပြီးကြည့် ကြည့် ပါအဆင်မပြေရင်လုပ်ပုံနည်းလမ်းလေးပြောပါ့ မယ်
သို့ ပေးပို့ နိုင်ပါတယ်
GOWILD Mt4 Platinum Play Casino site counter Platinum Play Casino
Jul 08 (41)
တစိမ့် စိမ့် ကြည့် 
လူကြည့် များသောဇတ်လမ်းများနှင့် ...ဓာတ်ပုံများ
နည်းနည်းတော့ ကြမ်းတယ်...ဒါပေမဲ့ လည်းကောင်းပါတယ်နှစ်ပေါက်သုံးပေါ့ 
အညှောင့် ကောင်းတဲ့ အဖြူမ
အားမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ နည်နည်းကြမ်းတာလေးတွေကြည့် ပေါ့ linkကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ပေးထားပါတယ်..(အာရှ)asiaပါ
အတွေ့ အကြုရှာနည်းသူမျာ်း
ရောက်လာမှတော့ တခုခုတော့ ပြောခဲ့ ကြပါ
အားလုံးအတွက်အာသာပြေ. Awesome Inc. template. Powered by Blogger.